Barnaamijyada - WoopShop ®
Iibso kalsooni | Abaalmarin Lacageed Lacag Bilaash ah
Lacagta & dib Policy
AllIlmaha & CarruurtaGadgets & AccessoriesCaafimaadka & BeautyGuriga & MakhaayaddaDhamaan cayaarahaFashion-ka RaggaJimicsigaSu'aalaha ugu sareeyaUnder $ 9.99Dharka Haweenka
US Dollar EURO Dollar Canadian Dollar Australia Pound Ingiriiska qoondayn Hindiya Ukraine Hryvnia Turkish Yasar Kutluay Yen Japan Swiss Franc Kobanheegan Ruush Ruble Lev Bulgarian Polish Zloty Serbian-ka Dinar Belarusian Ruble Denar Makedoniya Albaaniyaan Lek Georgian Lari Forint Hungarian Croatian Kuna Iceland Krona Azerbaijan Manat cusub Kazakhstan Tenge Moldovan Leu Real Brazil Mexico Peso Argentine Peso Peruvian Nuevo Sol South-Korean Won South African Rand Ringgit Malaysia Rupiah Indonesian Philippine Peso Doolarka Bariga Carribean Emirates Dirham Saudi Riyal Cumaan Riyaalka
Alaabta / R$0.00 0
Garoomada & Saacadaha
Baagagga & Qashinka
11 Xaalad degdeg ah oo ka baxsan
Isticmaal App App For Soonaha Wanaagsan
Baaritaan & Dareen farxad
Isticmaal our kordhinta chrome si aad si toos ah uga raadiso badeecadaada.
Hawlwadeen Google ee Kaalmada
Kusoo xejiso WoopShop Fashion Quiz leh kaaliyahaaga Google adiga oo leh: Weydii WoopShop Fashion Quiz
Kursiga Ilmaha Uurka 18.15€ - 40.86€
Raaxo Qureez Aan Bilaash Lahayn Oo Ragga Ah
34.50€ - 39.95€
Nambarka Sanadka Aan Xadka lahayn ee Loogu Tala Galay Haweenka
Muuqashada ugu fiican ee Maanta
Fashion Hip-Hop Style Lafaha roogga ₴1,330.43 ₴798.47
Cilad Xoolaha Biyaha Xayawaanka Qalinka lagu Xoqdo Rushka & 3pcs Qaadida Xashiishka Naqshad
₴23.43 - ₴73.48
Dumarka Waaweyn ee Sare ₴299.53 ₴162.14
Funny Ola Panda Thief Money Piggy Banks Boxboes Toy
4in1 Wi-Fi-ga Wi-Fi 4.0 Remote Device + Shirkadda gacanta gacanta ee gacanta Isgaadhsiinta Isku-duubka Monopod + Tripod + Kaydiyaha IOS Android Smart Phone
qiimeeyay 4.78 out of 5
Universal 3,5mm Jack Gacan Qalabka Gacanta Qalabka Gacanta Qalabka Muusikada
Maanta ugu sarreeya
Santhes Solid Solid Sashes Belted PU Lebbiska Xarkaha ah ee Fudud ee Haweenka
Caanaha Dufanka ah ee "Sweet Butterfly-Knot"
Qiimeeyn2,045.43 - Qiimeeyn2,243.10
Taanniyada Daabacaadda Hooyada iyo Gabdhaha Daabacaadda Ubax Maxi
Qiimeeyn920.34 - Qiimeeyn1,557.98
Woop! Waxaad ku jirtaa WoopShop.com qaybta tafaariiqda ee iibka iyo bogga internetka ee internetka iyada oo macaamiisha siinaysa xulashada sheyga ballaaran oo ka fiican, qiimaha tartanka, iibka hore ee suuqyada sare, iyo adeegga macaamiisha luqadaha kala duwan iyo adeegga macaamiisha ee kala duwan, iyo hannaan wax ku ool ah oo wax iibsi ah si loo yareeyo iibsashada geedi socodka. WoopShop waxaa loo qaybiyaa aduunka oo dhan iyada oo loo marayo bakhaaradeena dibadda iyo maraakiibta dhammaan wadamada bilaashka ah iyo malaayiin macaamiil oo naga jecel adduunka oo idil, Mareykanka, Yurub, Waqooyiga Ameerika, Bariga Dhexe, iwm. Ciwaanka: 1910 Thomes Avenue, Cheyenne, WY 82001
App Shopping App
Sahan Wanaagsan & Khibrad Fiican oo ku Saabsan Barnaamijyadayada
Dukaan WITH KALSOONI
Maya Spam. Just Coupons, Deals Deals, Discounts & More Saving.
* muujinaysaa loo baahan yahay
WoopShop: waa goobta kama dambaysta ah ee Dukaan Khadka Internetka
Haddii aad jeclaan lahayd inaad la kulanto sida ugu wanaagsan ee wax uga iibsashada internetka ee ragga, haweenka, iyo carruurta, waxaad ku jirtaa meesha saxda ah. WoopShop waa meesha ugu dambeysa ee loogu talo galay moodada iyo qaab nololeedka, oo lagu martigeliyo baayacmushtar badan oo ay ka mid yihiin dharka, kabaha, waxyaabaha kale, dahabka, alaabada daryeelka shaqsiyeed iyo waxyaabo kaloo badan. Waxaa la joogaa waqtigii aad dib ugu sheegi lahayd qaansheegashadaada qaab-dhismeedka agabkeena qiimaha badan. Dukaankeena internetka ayaa kuu keenaya alaabtii ugu dambeysay ee alaabooyinka nashqadeeya isla markaaba toos looga baxo guryaha moodada. Waxaad ka adeegsan kartaa khadka tooska ah ee WoopShop kana raaxada gurigaaga isla markaana waxaad ka heli kartaa waxyaabaha aad jeceshahay si toos ah albaabkaaga.
Rugta Iibsiga ee ugu Fiican iyo App-ka Ganacsiga Sare ee Tooska ah ee Farshaxanka
Ha noqo dharka, kabaha ama waxyaabaha kale ee lagu dhejiyo, WoopShop waxay ku siineysaa isku darka ugu habboon ee moodada iyo waxqabadka ragga, haweenka, iyo carruurta. Waxaad garwaaqsan doontaa in cirku yahay xudduud markay tahay noocyada labiska aad iibsan karto munaasabadaha kala duwan.
Dharka ragga ragga ah - WoopShop waxaad ka heli doontaa fursado fara badan oo ah shaatiyo rasmi ah oo casri ah iyo surweello, T-shirts iyo jaakado qabow, ama iskudarka ragga iyo dharka 'pajama'. Xiro mowqifkaaga funaanado daabacan. Abuur shaashad gadaal-ka-xero ah oo leh shaati-jeex jeexan iyo jaakad walwalsan. Ha ahaato gingham, buffalo ama qaab daaqadeed, shaadhadh la hubiyay waa kuwa aan loo dulqaadan karin. Iyaga ku xardho chinos, shaati guntin ama surwaal gogol ah si ay u arkaan muuqaal casri ah. U dooro muuqaal qurux badan oo jaakad leh jaakadaha rooga. U bixi cimilo daruuro leh si geesinimo leh jaakadaha biyaha u adkeysta. Ka dhex raadi qolka labiskaaga si aad u hesho dhar caawiya oo kaa dhigi kara inaad kalsooni ku qabtid koox kasta.
Dharka dumarka ee casriga ah - Dukaanka tooska ah ee dumarka ee WoopShop waa waayo-aragnimo kor u qaadida niyadda. Eeg siskaxana ku kalsoonow chinos iyo gaagaaban oo xagaagan daabacan. U fiirso taariikhdaaga adiga oo ku labisan dhar yar oo madow, ama dooro dharka casaanka ee sassy vibe. Dharka gogosha iyo T-shirts-ka ayaa matalaya ruuxa qadiimiga ah ee moodada dharka. Ka xulo kuwa aad ugu jeceshahay Bardot, garab garabka, shaati-gacmeedka, miskaha isku-dhafan, iyo koollo sare, si aad u magacowdo dhowr. Iyaga ku xardhan jeedsasharo jaakad khafiif ah, jaakad ama qalfoof. Kurtis iyo jiinis waxay sameeyaan isku-dhafka ugu habboon ee labiska isku-dhafka ah ee loogu talagalay dadka magaalada deggan. Xulashadeena waaweyn iyo xulashada lehenga-choli waa kuwo kufiican inay aragti ka sameeyaan xafladaha waaweyn ee bulshada sida aroosyada. Noocyadeenna salwar-kameez, kurtas iyo Patiala waxay ku habboon yihiin xulasho raaxo leh oo loogu talagalay xiridda joogtada ah.
Kabaha moodada ee dharka - In kasta oo dharka ay ninka sameeyaan, nooca kabaha aad xirto ayaa ka tarjumaya shaqsiyadaada. Waxaan kuu soo qaadan karnaa xirmooyin dhammaystiran oo ikhtiyaarrada ah ee kabaha casriga ah ee ragga sida sneakers iyo loafers. Samee bayaan xoog koronto ah kuna labisan dharka xayawaanka. Ku tababbaro marathon kaaga oo wata kabaha orodka ee ragga iyo dumarka. U dooro kabo ciyaaraha shaqsiyadeed sida teniska, kubbadda cagta, kubbadda koleyga iyo wixii la mid ah. Ama u gudub qaabka casriga ah iyo raaxada ay bixiyaan sandal, boodhadh, iyo daboolida. Sahaminta xariiqayaga kabaha moodada ee moodooyinka ay ku jiraan bambooyinka, kabaha ciribta, ciribta ciribta, iyo qalin-ciribta. Ama ku raaxayso sida ugu fiican ee raaxada iyo qaabka leh guryaha dabaqyada ah iyo kuwa biraha leh.
Qalabka qurxinta leh - WoopShop waa mid ka mid ah goobaha ugu wanaagsan ee laga iibsado internetka oo loogu talagalay alaabada qadiimiga ah oo si buuxda u buuxiya dharkaaga. Waxaad dooran kartaa analog caqli gal ah ama saacado dhijitaal ah waxaadna ku dhejin kartaa suunka iyo xarkaha. Soo qaado boorsooyinka ballaaran, boorsooyinka dhabarka, iyo boorsooyinka si aad ugu kaydiso waxyaabaha daruuriga u ah qaab ahaan. Haddii aad doorbideyso dahabka ugu yar ama gabal gabal ah oo aad u ifaya, ururinta dahabka ee shabakaddayada ayaa ku siinaysa xulashooyin badan oo cajiib ah.
Madadaalo iyo qabow - Ka adeegashada qadka tooska ah ee carruurta ee WoopShop waa farxad buuxda. Princess-kaaga yar wuxuu doonayaa inuu jeclaado noocyada kala duwan ee dharka quruxda badan, kabaha ballerina, timaha madaxa, iyo goos gooska. Farxiya wiilkaaga adoo kaxaynaya kabaha isboortiga, funaanadaha superhero, maaliyadaha kubada cagta iyo waxyaabo kaloo badan oo laga helo dukaankeena internetka. Fiiri safkayaga tooyada ee aad ku abuuri karto xasuus aad ku jeclaato.
Quruxleydu halkan ayey ka bilaabataa - Waxa kale oo aad dib u cusbooneysiin kartaa, dib u noolayn kartaa oo u muujin kartaa maqaarka quruxda badan adiga oo leh daryeel shaqsiyadeed, qurxinta iyo alaabada qurxinta ee ka socota WoopShop. Saabuunkeena, cajiinada maydhashada, kareemada maqaarka, looshannada, iyo waxyaabaha kale ee loo yaqaan 'aurvedic' ayaa si gaar ah loo habeeyay si loo yareeyo saamaynta gabowga loona bixiyo khibradda nadiifinta ee ugu habboon. Ka dhig maqaarkaaga nadiif iyo timahaaga uber-styrain leh shaambooyinka iyo waxyaabaha daryeelka timaha. Dooro qurxiyo si aad kor ugu qaaddo quruxdaada dabiiciga ah.
WoopShop waa mid ka mid ah goobaha ugu wanaagsan ee laga iibsado internetka ee Hindiya oo gacan ka geysan kara beddelka meelaha aad ku nooshahay gebi ahaanba. Ku dar midab iyo qofeed qolalkaaga gogosha sariirta iyo daahyada. U isticmaal miis miis caqli badan si aad u soo jiidato martidaada. Qurxinta gidaarka, saacadaha, xarkaha sawirka, iyo dhir dabiici ah ayaa hubaal ah inay nolosha ku neefsadaan meel kasta oo gurigaaga ka mid ah.
Farxad la Awoodi karo ee Fingertips-kaaga
WoopShop waa mid ka mid ah goobaha gaarka ah ee wax laga iibsado oo internetka ah oo adduunka oo dhan ay Fashion u wada heli karaan dhammaan. Fiiri soogalootigayaga cusub si aad u aragto dharka ugu dambeeyay ee dharka, kabaha, iyo waxyaabaha kale ee suuqa ka shaqeeya. Waxaad ka heli kartaa gacmahaaga qaabka ugu dhaqsaha badan xilli kasta oo xidhan. Waxaad sidoo kale ka faa'iideysan kartaa qaabka ugu wanaagsan ee moodada qowmiyadeed inta lagu jiro munaasabadaha ciidda Hindida oo dhan. Waxaad hubtaa inaad la yaabtid qiimaheena xilliyeed ee kabaha, surwaalada, shaatiyada, boorsooyinka dhabarka iyo waxyaabo kaloo badan. Iibka dhamaadka-xilli-iibku waa waayo-aragnimada ugu dambaysa markay moodada u suura-gasho la-awoodi karo.
Ka dukaameyso khadka tooska ah ee 'WoopShop' oo leh Kalsooni Buuxda
Sababta kale ee WoopShop ugu fiican dhammaan dukaannada internetka waa raaxada buuxda ee ay bixiso. Waxaad ku daawan kartaa magacyada aad ugu jeceshahay oo leh xulashooyinka qiimaha badeecado kaladuwan oo hal meel ah. Muuqaal-saaxiibtinimo-saaxiibtinimo ayaa kugu hagi doona habka xulashadaada. Jaantusyo cabir ballaaran, macluumaad wax soo saar iyo sawirro qaraar sarre ayaa kaa caawinaya inaad gaarto go'aamada iibsashada ugu fiican. Waxa kale oo aad xor u tahay inaad doorato xulashooyinkaaga lacag-bixinta, ha ahaato kaadh ama lacag-ku-siin. Nidaamka soo noqoshada 15-maalin wuxuu ku siinayaa awood dheeri ah sida iibsade. Intaa waxaa sii dheer, ikhtiyaarka iskudayda iyo iibsashada alaabada la xushay waxay qaadataa saaxiibtinimo-saaxiibtinimo heerka ku xiga.
Ku raaxayso khibradda dhib la’aan-free-ka ah adigoo si raaxo leh uga dukaamaysanaya gurigaaga ama goobtaada shaqada. Waxa kale oo aad uga adeegan kartaa saaxiibbadaa, qoyskaaga iyo kuwa aad jeceshahay oo aad uga faa'iidaysan kartaa adeegyadeenna hadiyadda munaasabadaha gaarka ah.
Soo degso barnaamijka WoopShop-ka ee tooska ah ee tooska ah hadda oo hel heshiisyo app-ka A-commerce ka fiican iyo dalabyo gaar ah oo ku saabsan dharka, qalabka, alaabada lagu ciyaaro, qalabka caruurtu ku ciyaaraan, drones, hagaajinta guriga, iwm. Android | macruufka